Mkpụrụ ntụ Synephrine ọ na-enyere aka maka ibu arọ? | AASraw Fat Loss ntụ ntụ
Mkpụrụ ntụ Synephrine ọ na-enyere aka maka ibu arọ?
/blog/Synephrine/Mkpụrụ ntụ Synephrine ọ na-enyere aka maka ibu arọ?
Ihe na 04 / 01 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Synephrine.
Ihe niile banyere Synephrine Powder
1.Wa bụ Powder Synephrine?
2. Ị ga - ewere Powder Synephrine?
3.Gịnị mere ndi mmadu jiri ejiji Synephrine?
4.How ka Synephrine Powder na-arụ ọrụ?
5.Isieke nke Synephrine dị ize ndụ?
6.Olee ka nchekwa dị Synephrine Powder maka ahụike gị?
7.Effects nke Synephrine Powder na ahụ mmadụ
9.Synephrine Powder raw ntụ ntụ na-atụ aro usoro onunu
10.Synephrine Powder Side Side Effects and Warnings
11. Ntụle ntụpọ Synephrine
12. Uru nke ịzụta Synephrine Powder si AAS Synephrine Powder supplier:
Akwukwo ubi nke Synephrine
I.Raw Synephrine Powder isi Characters:
aha: Ọkụ Synephrine
Molekụla Formula: C9H13NO2
Ọbara arọ: 167.21
Ọkụ Synephrine, ma ọ bụ dị ka ọ na-amakarị, Orange oroma, bụ osisi nke akwukwo, mkpụrụ osisi na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi na-ewe ihe ubi ma jiri ya mee ọgwụ ma na-eji mmanụ n'onwe ya mee mmanụ. A pụrụ itinye mmanụ mmanụ oroma mmanụ n'ahụ akpụkpọ ahụ iji nyere aka n'ịgwọ ọrịa, dị ka ndị na-agba ụda na ndị na-eme egwuregwu na-agba ụkwụ.
Ọ bụ ezie na a ka na-eduzi ọtụtụ ọmụmụ, enwerekwa ihe àmà zuru oke iji gosipụta na mgbe mmadụ na-ericha mmanụ ocha bara oke, ọ nwere ike ịkwụsị agụụ. Nke a bụ ebe Synephrine Powder na-egosi ihe ịrịba ama nke oke ọnwụ n'etiti ndị ọrụ n'ihi na ọ na-emepụta mmetụta na-adịgide adịgide n'ime ahụ iji mee ka onye na-eri ya nwee mmetụta dị ukwuu maka ogologo oge ma belata ọnwụnwa ọ bụla maka ọchịchọ ma ọ bụ ọchịchọ ịṅụ nri ọzọ. Site n'iji obere nri, ị na-eri obere calorie, nke n'aka ya, na-ebute arọ ọnwụ ruo oge.
2. Ka ị bụrụ na-ewere Powder Synephrine?
E wezụga ike igbochi agụụ, Powder Synephrine na-egosi enweghị ihe akaebe nke inwe ike ịba abụba n'onwe ya. Ya mere, enweghi ike iwere Powder Conephrine dị ka ọkụ ọkụ. Site n'iji eriri Synephrine na a abụba ọkụ ma, ị ga-eche na ị ga-anwa anwa anwa iri ụra n'ụbọchị gị dịka ị ga-anọgide na-adịkwu ogologo oge ma nweekwa ọchịchọ ịghara iri nri karịa kwa ụbọchị.
Naanị n'ihi na ọ bụ mmeju na ahịa apụtaghị na ị ga-ewere ya n'agbanyeghị. Enwupụta Synephrine ka na-anwale ma ụfọdụ nsonaazụ na-egosi na mgbe ọkụre, ọ nwere ike inwe mmetụta ndị nwere ike ịnweta, dịka isi ọwụwa, ọgbụgbọ, na obi mgbawa. Ọ dị mma iji dọọ aka ná ntị na ebe ọ bụ na a na-ewere Synephrine Powder dị ka ihe na-akpali akpali, na ndị nwere ma ọ bụ na-ebute ọbara mgbali elu, nwere akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ na ọrịa obi ma ọ bụ ọbụna nwere ọrịa strok, na ị ga-ezere iwepụta ngwaahịa a ọ nwere ike ibute mmụba n'ihe ize ndụ n'ihi na ọ na-ebuli elu obi.
3.Why mere ndị mmadụ jiri Synephrine ntụ ntụ?
Taa, a na-eji otutu ntụpọ Synephrine mee ihe maka mmetụta ya na-akpali akpali, na ike ya iji kpalite ihe bụ isi nke Synephrine Powder factsmetabolism. Ihe a magburu onwe ya yiri ka ọ dị irè na-enyere ahụ gị aka ịnọgide na-enwe ahụ ike ma na-akwado ezigbo metabolism.
Ihe dị ukwuu banyere Synephrine Powder bụ na ọ na-egosi na enwere ike ịmalite ụba na-emetụta metabolism ma na-akwado agụụ n'emeghị ka ọbara mgbali ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ obi.
Ọtụtụ ihe ndị nwere mmetụta ndị na-akpali akpali ga-amụba ma ọ bụ oke obi ma ọ bụ ọbara mgbali. A na-ejikwa akụkụ ahụ dịka ihe na-egbochi nrụgide na-emetụta mmetụta uche na egosipụtawo ibelata mgbaàmà nke ọnọdụ dị ala, na ọmụmụ anụmanụ.
4.How ke Ọrụ Synephrine Powder?
A na-eme ka ntụ ntụ nke Synephrine na-eme nke ọma n'ime ahụ anyị, site na njedebe nke amine. A na - etinye ya n'ahụ ('eri') site na enzymes n'ime ụbụrụ a na - akpọ Monoamine oxidase enzymes. Ndị a bụ otu enzymes ndị na-achịkwa ọkwa nke norepinephrine, serotonin, na dopamine, ya mere, ọ na-egosi na Synephrine Powder na-arụ ọrụ yiri nke ahụ na kemịkal ụbụrụ ndị a.
Ọ na-arụ ọrụ n'ime ụbụrụ iji kpalie mgbochi ahụ ma gbochie agụụ maka ihe oriri, karịsịa ọchịchọ maka carbohydrates.
A na-atụle ntụpọ Synephrine n'onwe ya dịka nchekwa, ọ bụrụhaala na ị na-arapara n'ọrịa a tụrụ aro. Enwere akụkọ nke isi ọwụwa dịka mmetụta dị n'akụkụ ụfọdụ. Isi ihe ilele anya bụ ijikọta ya na ihe ndị ọzọ na-akwalite ma ọ bụ iji ngwugwu na-ejikọta ntụpọ Synephrine na ephedrine ma ọ bụ PEA.
Enwere ume nke Synephrine bụ ihe na-akpali akpali ma na-ejikọta ya na ihe ndị ọzọ na-akpali akpali nwere ike ime ka ọbara mgbali elu, ọnyá na nkụchi obi dịkwuo elu. Nke a bụ ihe a na-atụghị anya banyere ọtụtụ mmadụ na-eji nchịkọta mgbakwunye nke nwere Synephrine Powder na caffeine na ephedrine, ma anyị na-akwado iji Synephrine Powder n'onwe ya.
Enwere ume nke Synephrine bụ ihe na-emekarị na ahụ mmadụ, ya mere iwere ya site n'èzí agaghị emerụ ahụ ike gị. Mkpụrụ osisi oroma dị ilu nwere ihe bara ụba nke Synephrine Powder, na mgbakwunye nke dị ugbu a n'ahịa bụ site na mkpụrụ nke mkpụrụ a. N'ịbụ ndị e ji ihe ndị e kere eke na-eme ya, ọbụna karị, dị mma iji rie karịa ihe ọ bụla ọzọ dị na ahịa nke na-enwekarị ọkwa dị elu. Ụdị dị otú ahụ nwere ike imebi ahụike mmadụ. Ya mere, Synephrine Powder bụ otu n'ime ihe kachasị mma iji rie. Ma dị ka ngwaahịa ọ bụla nwere uru na nkwonkwo ya, Synephrine Powder abụghịkwa otu. Ọ dị mma iji ya, ruo mgbe mmadụ na-agbaso usoro onodi a tụrụ aro. Na ngwa ngwa iji nweta nsonaazụ dị nchịkọta nke mgbakwụnye a, ọtụtụ ndị nwere ike ịkwụsị ya karịa ihe edere ya. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ndị mmadụ nwere ike ịkọ na enwe nnukwu isi ọwụwa.
Mana ihe kachasị mkpa ka a na-ekiri bụ Synephrine Powder na ihe ọ bụla ọzọ dị ka ephedrine ma ọ bụ PEA. N'ịbụ onye dị ike na ya n'onwe ya, a na-atụ aro Synephrine Powder iji jiri otu ihe. Ighata ya na ozo ndi ozo nwere ike ibute nsogbu ahuike dika obara mgbali elu, ijigide obi mmadu, ma obu njo. Ụfọdụ ndị na-ere ahịa nwere ike ọbụna ire ya site na agwakọta na nchịkọta dị ka caffeine ma ọ bụ ephedrine. Ma ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji kpoo Powen Synephrine dị ka otu ihe.
7.Mmetụta nke ntụ ntụ Synephrine na ahụ mmadụ
Enwunye Synephrine bụ ihe na-emekarị na ahụ mmadụ, ma ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ya bụ nke a na-ahụkarị n'ime mkpụrụ osisi oroma dị ụtọ. Ngwurugwu a bara uru nke ukwuu maka ndị na-agbalịsi ike ịkwụsị ibu arọ ha ma belata agụụ. Maka mmadụ ole na ole, nnọkọ mgbatị pụrụ ịdị oké njọ. Enwere ike ntụpọ Synephrine nwere ike ịba uru n'okwu dị otú ahụ. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-eche n'echiche na ihe mkpali nwere ike imebi ahụ ha. Ọ nwere ike ịmalite mgbanwe mgbanwụ dị irè nke nwere mmetụta dị njọ n'ahụ ahụ ike ya. N'igosiputa echiche ndi a nile, Synephrine Powder supplement has been a buzz on the market with its effective results in helping to lose fat fat.
Ihe pụrụ iche nke mgbakwụnye a bụ nke a na-eme site na ihe ndị e kere eke dịka nchịkọta nke mkpụrụ osisi oroma dị oke mmiri nke nwere ọtụtụ akụkụ Synephrine Powder. Njirimara ndị a na-eme ka nke a gbakwunye nhọrọ dị mma maka ndị na-achọ nkwụsị ọnwụ kwesịrị ekwesị. Akụkụ bụ isi nke mgbakwunye Synephrine Powder bụ na ọ na-ebute ọnụ ọgụgụ nke metabolism ma ọ dịghị egosi mmetụta ọ bụla na mkpụrụ obi mmadụ ma ọ bụ mgbali elu ọbara. Ya mere, ọ bụrụ na ị nwere akụkọ gbasara ahụike nke ọrịa oria ọbara ma ọ bụ ọbara mgbali elu, ma gị onwe gị kwa chọrọ ịghọ ụbụrụ nke flab, mgbe ahụ, mgbakwunye Synephrine Powder nwere ike ịbụ ezigbo enyi gị. N'agbanyeghị nke a, a na-atụ aro ka tupu ịchọọ ịzụta mgbakwunye a, jụọ dọkịta maka nduzi ka mma.
E wezụga inyefe ndị na-emegide ya dịka mgbakwunye na-enweghị mmetụta ọ bụla na mkpali obi na ọbara mgbali, ndị mmadụ na-ejikwa ihe mgbakwunye nke Synephrine Powder nke nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe nkedo gị. Nchegbu, ịda mbà n'obi, na nchegbu bụzi akụkụ ndụ mmadụ niile. Ya mere, ihe mgbakwunye nke nwere ike ime ka ọnọdụ dịkwuo mma ma ọ bụghị inye aka na ịchịkwa agụụ na inyere aka ịkwụsị ibu ugbu a bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị ahịa. Enwunye Synephrine na-ebelata ịda mbà n'obi ma nyere aka n'ịgwọ nsogbu ndị metụtara ya dị ka nsogbu ihi ụra, mmetụ obi na-esote ọnụ, na ịchọrọ iri nri n'oge nsogbu. Ugbu a, ka anyị lee ọrụ nke Synephrine Powder.
8.Enwere ntụ ntụ nke Synephrine
Enwere ike ịmịnye mpempe
Enwere ike iji ndọtị a mee ihe dị ka ihe dị ike nke na-enwe nkwarụ metabolism, site na mmetụta ya na thermogenesis (mmepụta okpomọkụ n'ime ahụ site na abụba abụba).
N'ọtụtụ nchọpụta, ndị nchọpụta ekwuwo banyere mmetabolism-mmetụta dị ike nke mgbakwụnye a. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta a na-emeghe na-achọpụta na ụmụ nwanyị 9 nọ na-arụ ọrụ na-efu kilogram 2.40, mgbe e weghaara ụtụ ahụ, ma na 0.94 n'arọ mgbe a na-etinye placebo. N'ọmụmụ ihe ọzọ, ndị na-eme nchọpụta lekwasịrị anya na mmetụta nke Synephrine Powder-containing chew-tablets on the heart heart, ọbara mgbali, na agụụ. Nsonaazụ gosiri na ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama na agụụ na-enweghị mgbanwe n'ọgụgụ obi ma ọ bụ mgbali elu ọbara.
Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya, nke e bipụtara na International Journal for Medical Sciences, na-elekwasị anya na mmetụta ndị metabolic, ma naanị ma na njikọta na flavonoids ndị ọzọ. Ndi oru nyocha choro na onu ogugu enwere ike ime ka mmadu nwekwuo ugwo nke 65 Kcal maka ndi na-acho akwukwo ozi nke 65 mg. N'ụzọ dị oke mkpa, ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na, ọbụlagodi mgbe ejikọtara ya na flavonoids Naringin na Hesperidin, mgbakwụnye a emeghị ka ọbara mgbali elu ma ọ bụ obi dị elu:
"Ọ dịghị otu n'ime ndị ọkachamara na-agwọ ọrịa gosipụtara mgbanwe ndị dị na mkpụrụ obi ma ọ bụ mgbali elu na-emetụta ndị otu na-achịkwa, ọ nweghịkwa ọdịiche dị na njirimara onwe-akọwara onwe ha banyere mgbaàmà 10 n'etiti òtù ọgwụgwọ na otu njikwa. Nchọpụta a na-adịghị ahụkebe nke ngwakọta thermogenic nke dị elu nke na-ebuli elu ọnụ ọgụgụ na-enweghị atụ na mgbatị ọbara na mkpịsị obi na-enye ohere maka ọmụmụ ihe ogologo oge iji chọpụta uru ọ bara dị ka onye na-elekọta ndị na-achịkwa ihe. "(G Kaats et al., 2011)
Tinyere ọmụmụ ihe ole na ole na-adịbeghị anya, ihe ndị a na-egosi ụfọdụ uru na-adọrọ mmasị metụtara mmụba nke metabolism na nkwado maka ibu arọ. N'adịghị ka ọtụtụ ihe mgbakwunye ndị ọzọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke metabolism dị elu, mgbakwụnye a apụtaghị na ọ nwere mmetụta ọ bụla na mkpụrụ obi ma ọ bụ mgbali elu ọbara.
Na-eme Ka Ebumnuche Echiche na Nzube Na-amụba
Abara uru maka ichebara uche na nche echiche na-abụkarị n'ihi nyocha, yana site nyochaa mmetụta dị na ndị nabatara na ụbụrụ na mmekọrịta mmekọrịta ya na Caffeine. Ọzọkwa, nyochaa sayensi na-eleba anya na nchekwa na mmetụta nke mgbakwụnye mmezi a ekwuola ikike ya iji nyere aka na-elekwasị anya na uche.
Ntinye nke a na - ejikọta na enzymes Monoamine oxidase (MAO) n'ime ụbụrụ - kpọmkwem na ndị na-anabata ụdị MAO-A. Ọ bụ ezie na ọ naghị egbochi ọrụ nke MAO enzymes, mmeju a na-eme dị ka asọmpi ligand ma na-ejikọta ndị nabatara MAO, na-egbochi ha ịnweta oxidizing ndị neurotransmitters nke ha ga-emekarị. A na-amata ogige ndị na-eme monoamine oxidase enzymes maka ikike ha nwere iji melite elekere anya na ncheta na ha abanyela n'ọtụtụ ngwa - mgbe mgbe iji belata nrụgide ma kwalite ọnọdụ ahụ ike.
Ọzọkwa, a gosipụtara mmezi a iji nwee mmekọrịta mmekọrịta synergistic na Caffeine. Nnyocha e mere egosiwo na ogige abụọ ahụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka uche na nchekwube dịkwuo mma, yana ịmụrụ anya na ike iche echiche. Dị ka otu nnyocha (nke e bipụtara na International Journal of Medical Sciences) chọpụtara, ọtụtụ Synephrine Powder-nwere ihe mgbakwunye na ngwaahịa na-agụnye Caffeine n'ihi mmekọrịta ha na-ejikọta mmekọrịta ọma. Iji caffeine mee ihe nwere ike inyere aka mee ka mmetuta nke mmeju a.
Inwewanye ike na arụmọrụ
Ihe mgbakwunye a nwekwara mmetụta dị ịrịba ama ma dị ịrịba ama na mmega ahụ, a gosipụtara ụfọdụ ole na ole n'ime nnyocha ụmụ mmadụ na-adịbeghị anya. O nwere ike ime ka njikwa mmega ahụ na ntachi obi dịkwuo ike, yana ịkwalite ume ike na umemogenesis.
N'otu nnyocha, ndị nnyocha na-elekwasị anya na mmetụta nke mgbakwunye a na mmega ahụ, ma naanị ma na caffeine. Nsonaazụ gosiri mmụba dị ịrịba ama na ike pụtara, ntachi obi, na mmega ahụ maka ụdị ule. Enwere ike iji ntụ ntụ Synephrine mee ka ike na arụ ọrụ dị ike ma ọ bụrụ na ejiri ya naanị ma ọ bụ mgbe ejiri ya na Caffeine.
N'ọmụmụ ihe ọzọ, ndị nchọpụta chọpụtara na mgbakwunye P-Synephrine Powder, mgbe a na-ewere ya na 2-3 mg / kg, na-eme ka mmabachasị abụba (abụba ọkụ na ọgbọ ume ọzọ, nke a na-akpọ thermogenesis) na ndị mmadụ nọ na-emega ahụ ike. N'ụzọ na-akpali mmasị, na placebo na òtù ndị a na-anwale, ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke mmiri ara ehi na-ahụ na-eme na gburugburu 38-42% nke VO2 max, maka onye ọ bụla.
Ịchọ nri n'oge awa nwere ike inwe nsogbu na ahụ gị. Ee, ọ na-adọrọ adọrọ iji jide nri nri maka nri ehihie, ma ọnụ ọgụgụ kalori nke o nwere ga-agbakwunye ibu arọ gị ugbu a. N'ihi na ụfọdụ ndị na-eri nri bụ àgwà dịka ụra. Otú ọ dị ha na-agbalị, ha anaghị achịkwa ọchịchọ ha maka nri. Mana mmadu nwere ike iru mmadu zuru oke mgbe o na - akwado nduzi nile nke ga - enyere aka n'iwelata. Nke mbụ bụ àgwà gị nke ịme ihe omume mgbe niile ma ọ bụghị oge mgbatị ahụ. Nke abuo, obia ka i na-enwe nri kwesiri ekwenye na nri. Ndị na-eri nri na-atụ aro chaatị a ka ọ bụrụ na ọnwụ dị arọ. Ma ọ bụrụ na mmadụ niile na-arụsi ọrụ ike a, ọ na-agwụ agwụ, mgbe ahụ, nsogbu niile ya na-aga. Ya mere, ntinye ume nke Synephrine Powder bụ uru bara uru maka ha dị ka ụyọkọ entwine mmezi ahụ na ụbụrụ ụbụrụ na ntinye nke metabolism nke na-enye aka n'ịchịkwa agụụ, karịsịa maka ndị gụrụ.
Na-enyere aka na ọnwụ
Ibu ibu bu oru di egwu. Mmadu aghaghi inwe otutu ihe siri ike iji mee ka aru abuo. Ibu oke, dị ka anyị si mara, kpatara ọrịa dịka nsogbu obi, thyroid, ọbara mgbali elu, ọrịa shuga, ma ọ bụ arthritis. Nnukwu ahụ mmadụ na-emetụta ụbụ ụkwụ gị ma bulie isi ihe mgbu. Ya mere, ndi mmadu kwesiri idebe onodu ha. N'ikwu nke a, mgbe ụbọchị nke na-agwụ ike n'ọfịs ahụ, ọtụtụ n'ime anyị ga-eche na ị ga-aga maka nnọkọ mgbatị. N'okpuru ọnọdụ ndị dị otú ahụ, ọchịchọ ịchọta zuru oke na-ewe oche azụ. Enwere ike ntinye ume nke Synephrine na ahịa iji nyere gi aka belata ibu. Ọ na-emetụta thermogenesis ma na-ekpo ahụ ahụ iji belata abụba. Ngwaahịa a na-egbochi ịchekwa abụba ọ bụla ọzọ. Iji mgbakwunye a mee ihe mgbe nile ga - eme ka usoro ịghara ịba ụba ngwa ngwa.
Ọrụ dịka nkwalite ihu igwe
Ọnụ ọgụgụ buru ibu bụ otu n'ime ihe ịrịba ama ndị na-egosi na ị na-eduga ndụ nhụsianya. Nke a bụ n'ihi na mgbe mmadụ nọ ná nrụgide, ọchịchọ ya maka nri, karịsịa nri ụra na-abawanye karịa onye ọ bụla. Ha na-eche na iri nri nwere ike ịbụ ụzọ ị ga-esi wepụ ihe ị chọpụtara site na nrụgide ma ọ bụ nchegbu. Nchegbu na nchekasị na-esonyekwa na ịmalite inwe mmetụta uche, ịkpa àgwà na-adịghị mma, obere ndidi iji na-emeso ndị ọzọ, wdg. Ya mere, a chọrọ n'ezie ọgwụgwọ nlekọta nchegbu n'ọnọdụ dị otú ahụ. Ọ bụrụ na nchekasị gị na-ebelata, ị gaghị eche na ị ga-eme ka uche gị ghara ịdị na-eri nri ndị mmanu na mmanu. Maka ndị a, mgbakwunye Synephrine Powder nwere ike ịbụ nhọrọ ị nwere ike ịhọrọ. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ dị ebube iji mee ka ọnọdụ gị dịkwuo mma ma mee ka ndụ dị mma ma na-arụsi ọrụ ike. E wezụga nke ahụ, ọ ga-enyekwu aka na-enyere gị aka ịkwụsị ibu nke ị nwetara n'oge oge nsogbu gị. Ọzọkwa, ọ ga-etinye nlele maka oge ị na-achọ mgbe niile, nke ịkọ ihe. Ya mere ichikota ihe ndi a nile, o yiri ka Synephrine Powder bu ugwo otutu ndi mmadu nwere ike iji.
Na-ebelata ịda mbà n'obi
A na-agbagha nsogbu na ịda mbà n'obi. Mmetụta ịda mbà n'obi nwere ike ịbịara ma nke onwe gị yana ndụ ọkachamara. Nrụgide ọrụ dị ukwuu, maọbụ ịghara ikweta ọrụ ịrụ ọrụ nwere ike ọ bụghị nanị na ị ga - ewetara gị aha ọjọọ na nzukọ, ma ọ pụkwara imetụta mmụọ gị. Ọ bụrụ na gị onwe gị kwaa, ịda mbà n'obi nwere ike ibute na di ma ọ bụ nwunye gị, maọbụ ọrịa ahụike ogologo oge na gị ma ọ bụ onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ na-ata ahụhụ, ma ọ bụ na-emegbu ndị ibe gị mgbe niile maka ibu ibu. Ihe ọ bụla dị anyị gburugburu nwere ike iduga ịda mbà n'obi, ọ pụkwara inwe mmetụta dị njọ n'ahụ ahụ ike gị. Ọ nwere ike ịnye gị ụra ehi ụra ma mee ka ike gwụrụ gị niile n'ụbọchị. Dị ka ihe ngwọta, ọtụtụ ndị na-anata ndụmọdụ maọbụ gaakwuru onye ọkachamara. Enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-achọ ọgwụ mgbochi ịda mbà n'obi, nke nwere ike imetụta ndụ mmekọahụ gị ọzọ. Ya mere, olee ọgwụgwọ dị? Na-aza ajụjụ ndị a, Synephrine Powder na-agbakwunye ụgbọ mmiri na ụlọ ahịa ahụike yana ihe ngwọta siri ike na-emeso ịda mbà n'obi na ime ka ị nwee mmetụta. Usoro onu ogugu kwa ubochi nwere ike bara uru ma oburu na enwere nsogbu a maka ogologo oge.
9.Synephrine Powder raw ntụ ntụ atụ aro ụbụrụ
Ihe otutu Synephrine Powder-nke nwere ngwaahịa na ahịa na-akwado 100mg / ụbọchị maka uru ndị na-abaghị uru, ọ bụ ezie na ndị na-eme nnyocha kwenyere na doses dị ntakịrị ka 35mg nwere ike ịdị irè. Enwụrụ Synephrine nwere synergism na caffeine, ya mere ọ bụrụ na ị na-echekarị caffeine, ọ kachasị mma ịmalite obere obere na Synephrine Powder ma ọ bụrụ na ị na-ejikọta caffeine. Iji zere ọgwụ na-egbu egbu, ndị na-eji dosages ekwesịghị ịga ma ọ bụ gafee 200mg / akara kwa ụbọchị.
Synephrine Powder dosage malite na 10 gaa 20mg iji chọpụta nkwụsị gị. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị nwetaghị mmetụta ndị na-adịghị mma, buru 20mg ọzọ mgbe ọ dịkarịa ala 2 awa. Ejila oge doso ugboro ugboro kwa 2 gaa na 4 awa ma ghara iburu n'ime 4 awa nke ụra. Ọkara ndụ nke Synephrine nwere gburugburu 2 awa.
Power Synephrine bụ ihe dị ike nke nwere ike ịmepụta metabolism n'ime ahụ mmadụ nke na-enyere aka n'ịkụ ọkụ ndị ahụ na-achịkwa agụụ gị. A na-atụ aro usoro ọgwụgwọ nke 10-20 mg ugboro atọ n'ụbọchị. Otú ọ dị, maka ụfọdụ ndị, a na-enyekwa usoro ọgwụ 50 ma ọ bụghị ugboro atọ n'ụbọchị. Ọ ka mma maka ịgwọ ahụike tupu ị kpebie na ọ ga-agbaso ya.
10.Mmetụta Mmetụta nke Synephrine na ịdọ aka ná ntị
N'ụzọ dị oke mkpa, a na-ewere P-Synephrine Powder dị oke nchebe, n'ihi ikike ya iwelie ume na metabolism na-enweghị emetụta ọnụ ọgụgụ obi ma ọ bụ mgbali elu ọbara.
E nwere mgbagwoju anya banyere nchekwa nke mgbakwụnye mmezi a, n'ihi nsụgharị nke eriri nke nwere Synephrine Powder tinyere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enye ume ike / metabolism-boosting, ụfọdụ n'ime ha mara ịmepụta mmetụta ndị na-achọghị. Ọtụtụ 'nchịkọta' nchịkọta 'nwere ngwaahịa a na ogige ndị ọzọ dị na Citter Orange / Citrus aurantium - tinyere Ephedrine a machibidoro iwu ugbu a. Na mgbe gara aga, ndị na-eji ihe ndọtị ndị a nwere nsogbu na nke a kpatara ọgba aghara nke nchekwa Synephrine. Nyochaa akwụkwọ na-adịbeghị anya na-eleba anya na nchekwa nke Synephrine Powder maka ụmụ mmadụ. Ndị nchọpụta kwuru eziokwu ahụ na mgbakwunye a nwere oke oke nchekwa, ọ nweghịkwa mmetụ obi ọ bụla na-arụ ọrụ nha nke 100 mg.
Usoro mmemme maka mgbakwunye a dị ike gụnyere mmekọrịta na β-3 adrenergic receptors (onye ọrụ ya bụ ịchịkwa abụba na carbohydrate metabolism), NMUR2s, protein protein activated AMP, cAMP, na Ca (2 +) - ndabere na-adabere. Mmezi a na-emepụta ihe ntanetị n'ahụ ụfọdụ na α-1, α-2, β-1, na β-2 adrenergic receptors, nke na-enye aka melite ogo ume na-enweghị mmepụta na ụba obi ma ọ bụ mgbali elu.
Mmetụta ndị sitere na ibu ndị nwere ike ịgụnye isi ọwụwa, ọgbụgbọ, na nkwụsị. Ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ọgwụgwọ ọ bụla ma ọ bụ na-ewere ọgwụ ọ bụla, biko gwa dọkịta gị tupu i jiri mgbakwunye a. Enwebeghị nchọpụta zuru ezu banyere nchekwa nke mgbakwụnye a maka ndị na-enye nwa ara na ndị ime ime.
Nkọwa ntụ ntụ nke 11.Synephrine
Na nchịkọta, a na-emepụta mgbakwunye a site na mmanụ oroma (Citrus aurantium) ma mara maka ikike nke iweli thermogenesis na ọnụ ọgụgụ metabolism. O kwesịghị ichegharị na ogige dị ka Ephedrine, Hordenine, ma ọ bụ ihe ndepụta site na opema Seville ma ọ bụ oroma oroma nke nwere ọtụtụ ụdị phytochemicals.
Ndị na-eme mgbakwunye a na-ekwukarị banyere ike ya iji kwalite ume ọgụgụ isi na ilekwasị anya, yana uru ya na-enwewanye ntachi obi na mmega ahụ. Nnyocha egosiwo na ikike nke mmezi a iji mee ka ụbụrụ na-eme ka abụba ghara imetụta ụda obi ma ọ bụ mgbali elu ọbara, na-eme ka ọ dị nchebe karịa ọtụtụ ihe nrụgide na metabolism-na-ewuli elu taa.
A na-ahụ ntụpọ Synephrine Powder na ahụ mmadụ na osisi ụfọdụ karịsịa mkpụrụ osisi oroma oroma. Osisi a dị na mpaghara ebe okpomọkụ Asia na East Africa. Site na mgbe ochie, a na-eji mkpụrụ osisi oroma dị arọ maka uru ọgwụ. O nwere nnukwu ephedrine na Synephrine ntụ ntụ. Ọ bụ ezie na ephedrine kọrọ akụkọ ọjọọ banyere ndị nwere akụkọ ihe mere eme tupu oge ahụ, e jiri Senser Powder wepụ ihe na-eme ka ọgbụgba, afọ ntachi, na nsogbu ndị metụtara nkwarụ. Dị ka isi mmalite si kwuo, a na-eji Power Synephrine chọtara mkpụrụ osisi oroma dị arọ maka ịgwọ nrịkịkị, mgbapụta ọnwụ, na iji belata agụụ na mpaghara Mediterranean. A na-ejikwa mmanụ sitere na mpempe akwụkwọ a mee ihe maka nlekọta anụahụ.
Ya mere, ọ bụghị ugbu a, kama Synephrine Powder bụ ihe jupụtara na ya enyere aka na-efu. N'oge a, ọ dị n'ahịa dị ka ihe na-akpali akpali nke na-eme ka usoro nke oge mgbapụta gị dị njọ ma na-echekwa oge agụụ gị. Mgbe mmadụ nọ na-aga mgbakọ oge kpọmkwem n'ihi na ọ na-efunahụ ihe ndị ọzọ, mgbe ahụ, a ghaghị ịnọgide na-eri nri kwesịrị ekwesị, iji nweta ọdịdị zuru oke. Otutu mmanu mmanu ma obu nri ndi ozo abughi nani na-eme ka abuba buru ibu ma ihe oriri ndi a bu kwa cholesterol nke bara uru, nke a na-eme ka aru mmadu nwee ike ibute ọrịa obi. Ya mere a na-atụ aro ka ị nọgide na-arụsi ọrụ ike site n'inweta nri dị mma, ọkacha mma akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mkpụrụ osisi maka nri gị. Ewezuga nke a, iji usoro mgbatị nke Synephrine Powder mee ihe mgbe nile nwere ike ime ka ọganihu nke oge mgbatị gị dịkwuo mma.
12.Abara uru nke zụrụ Synephrine ntụ ntụ site na AAS Synerfrine Powder supplier:
2.Fast na Nchekwa nkwụsị: Nkọwa ntụ ntụ Synephrine
Yohimbine ntụ ntụ: Uru na ojiji nke Yohimbine Kedu ka esi eji Topiramate uzuzu maka ubu ibu? Ihe kachasị 10 iji jiri L-carnitine ual Nwee oke ọgwụ ọjọọ L-carnitine Powder
Tags: zụrụ Synephrine ntụ ntụ, Synephrine ntụ ntụ, Synephrine ntụ ntụ maka ire ere, Synephrine ntụ ntụ ndị na-ere ngwaahịa
Garcinia Cambogia wepụkwa ntụ ntụ maka ụda ibu	Ihe niile ị kwesịrị ịmara banyere Orlistat ntụ ntụ maka ọnwụ abụba